Ebumnuche 5 iji kwado ziri ezi iringlọ ọrụ Digital Marketing Agency | Martech Zone
Izu a, m na-agụ ọkwa si ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ na ihe kpatara ị ga-eji were ha. Ihe mbu na mbu bu dijitalụ ahịa nka. Amaghị m na m kwenyere na nke ahụ ma ọlị - imirikiti ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ na nke ahụ nwere ngalaba ahịa na ebe ahụ nwere nka ịtụnanya ma anyị na-amụkarị ha n'aka ha dịka ha na-amụta n'aka anyị.
Ihe 5 kpatara ị ga - eji zụta ụlọ ọrụ na - ere ahịa dijitalụ
Urelọ ọrụ gọọmentị - ụlọ ọrụ dijitalụ ekwesighi ichegbu onwe ya gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị n'ime, nsogbu mmefu ego, ịchụ ego / ịchụpụ, na mpaghara ndị ọzọ na-elekwasị anya na onye na-ere ahịa na-azụ ahịa kwesịrị inwe nchegbu. A na-akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ dijitalụ nwere ihe mgbaru ọsọ a kapịrị ọnụ na ha kwesịrị iru ihe mgbaru ọsọ ndị ahụ, ma ọ bụghị na mmekọrịta ahụ agwụla. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịkwụ ụgwọ karịa otu awa karịa ndị ọrụ, oge nọrọ na-elekwasị anya na ọrụ aka na-eme maka ọdịiche ahụ.
Access - ebe DK New Media gị na ndị ahịa iri na abuo na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, anyị nwere ike inye ikikere ngwanrọ nke ụlọ ọrụ ma gbasaa ọnụ ahịa ndị ahịa anyị. Otu mfe akuko ngwa anyị nwere na ihe niile nke anyị ahịa n'anya na-efu ọtụtụ puku dollar kwa oche… ma anyị na-azụta oche 20 na-enye ndị na-akuko dị ka akụkụ nke anyị alo ngwugwu.
Results - ntinye aka anyi biara na ubochi iri ato n’ajuju ajuju. Ndị ahịa anyị nwere ike ịkwụsịtụ ma ọ bụ kwụsị mmekọrịta oge ọ bụla ma ọ bụrụ na ha anaghị enweta nsonaazụ ha chọrọ. Ọ bụrụ na ị were otu otu, onye were gị n'ọrụ bụ ọrụ maka ego, ọzụzụ, nlekota, yana ịchụpụ onye ọrụ ahụ. Site na ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ, nke ahụ bụ ọrụ ha - ọ bụghị nke gị. Ọ bụrụ na ha emeghị, ị chọta ụlọ ọrụ ọzọ na-enweghị isi ọwụwa niile.
arụmọrụ - Ebe ọ bụ na anyị zụlitere atụmatụ dị iche iche gafee ndị ahịa n'oge dị iche iche na nghọta ha, anyị nwere ike ịnwale otu onye ahịa wee wepụta ndị ahịa anyị niile atụmatụ ahụ. Nke ahụ na-ebelata ihe egwu ma hụ na nsonaazụ dị mma, belata oge, ma belata mmefu niile ma na-abawanye nsonaazụ.
Oghere - Oge ụfọdụ anyị na - arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị pụtara ìhè n’otu atụmatụ abụọ ma ọ bụ abụọ, yabụ mbọ ha na - aga n’ihu n’otu ụzọ. Y’oburu na ibu guru email, ikuku ikuku buru oke uzo gi iji meputa ihe. Don'tnweghị oge iji mụta ma nwaa usoro ndị ọzọ ka ị wee tinye ebe ị na-elekwasị anya ebe ị maara na ị ga-enweta nsonaazụ. Gba ụgwọ ụlọ ọrụ na-enye gị ohere iji nọgide na-elekwasị anya, mana chọpụta oghere ndị ụlọ ọrụ ahụ nwere ike mejupụta.
Hubris juru ebe niile n'ime nnukwu ụlọ ọrụ. Na ego ego, e nwere bụ mgbe onye na-arịọ Kedu ihe kpatara na anyị enweghị ike ị were mmadụ ụgwọ ma mee ya n'onwe anyị? Site na ntanetị dijitalụ na-agbanwe mgbe niile na ụlọ ọrụ na-agbanwegharị na mgbanwe, ụlọ ọrụ na-ata ahụhụ site na nsogbu akụ, ezughi oke ngwaọrụ, usoro na-ezughị oke na nsogbu ndị ọzọ na-egbochi ha ịmezu atụmatụ ha chọrọ ịnwale ma ọ bụ zuru oke.
Ndị egwuregwu kachasị ukwuu nwere ọtụtụ ihe - ha na-ewe ndị ọkachamara n'ihe banyere nri, ndị dọkịta, ndị ọkachamara agility, ndị nkuzi, na ihe ndị ọzọ iji nyere ha aka inweta ịdị ukwuu. Inye ụlọ ọrụ dijitalụ nwere ike inyere gị aka ịgbatị ngwa ngwa, gbue ọsọsọ, ma rụpụta nsonazụ dị ịtụnanya enweghị ike ịmakọ n'ime. Iringgba ụgwọ ụlọ ọrụ kwesịrị inyere ụlọ ọrụ gị aka ịdị ukwuu ahịa dijitalụ.
Tags: gị n'ụlọngadijitalụ gị n'ụlọngaụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụihe kpatara yaya mere
M ga-ad a 'nụrụ nụrụ' na a isi mkpịsị aka ruo ndepụta dị n'elu.
Na Ndị Mmepụta Ndị mmadụ, anyị ahụla ọtụtụ ndị ahịa ụlọ ọrụ anyị ka ha si abịakwute anyị ọ bụghị naanị maka ebumnuche ndị edepụtara n'elu, kamakwa n'ihi mmekọrịta anyị na ibe anyị. Mgbe onye ahịa ahụ hapụrụ ụlọ ọrụ, ha ekwesịghị imegharị mmekọrịta ahụ - ha na-akpọrọ anyị gaa ụlọ ọrụ ha ọzọ. Nke a na-enye ha ohere ịmeghe ụlọ ntụkwasị obi ma anyị nwere ike ịmaliteghachi ozugbo.
Ntọala a na-enye anyị ohere igwu n'ime atụmatụ ọhụrụ na ụzọ aghụghọ na ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ, ebe anyị na-eme ka mmekọrịta anyị na-arụ ọrụ belata ụzọ abụọ mmụta nke onye ahịa ọhụrụ yana kọntaktị ọhụrụ. Nke a na - enye onye ahịa ohere ka ọ dịka kpakpando, na - enweta nnukwu nsonaazụ ngwa ngwa.